Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSally
5 recent guests complimented Sally for outstanding hospitality.
Eyakho indlu encinci nayo yonke into oyifunayo. Ibhedi yokumkanikazi etofotofo, igumbi lokuhlambela elipheleleyo, ikhitshi eline-microwave, itoaster, ifriji, igumbi lokuhlala langoku, iTV, iwifi & neNetflix. Hlala kwidesika kunye negadi yakho encinci. I-3.8 kms ukuya elunxwemeni kunye neSitalato esikhulu kunye neendawo zokutyela. Ndwendwela ii-wineries, iilwandle, kunye ne-Hot Springs. Hamba uye kwiRacecourse, imarike, iicafe. Indlu idityaniswe nendlu enkulu kodwa yahluke ngokupheleleyo. (umnyango wokungena, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala, ikhitshi kunye negumbi lokuphumla. Akukho bantwana.
Wend ezantsi indlela yamatye ukuya kumnyango wakho. Hlala edekeni usele. Xa kubanda, ngena esofeni kwaye ubukele i-telly okanye ubambe imidiya yakho yentlalo kunye ne-wifi. Ulambile? Kukho ikhitshi eline-microwave, itoaster kunye neketile. Zigalele iwayini. Kukho igumbi lokuhlambela eliphambili kuwe kunye neshawa kunye nebhafu. Emva koko ukusnuza ngebhedi yokumkanikazi esemgangathweni oza kuthontelana kuyo. Nandipha
4.90 ·Izimvo eziyi-81
4.90 · Izimvo eziyi-81
Ukuhamba umgama ukuya kwi-Mornington Racecourse, Steeples Bistro, Commonfolk cafe, (i-vibe enkulu kunye nokutya), i-cafe yoodade ababini, bahambe baye epakini, i-5 min drive ukuya elunxwemeni, iivenkile zeSitrato esiPhambili, imivalo yewayini (i-Brass Razu iyinto eqhelekileyo) ii-pubs, umculo ophilayo (iKitchen kaThixo) uSugo unokutya okuhle okanye iDOC yesiTaliyane. Yiya kude ukuya eSorrento, Arthur's Seat, Flinders, ndwendwela ii-wineries kwaye ubone iindawo
Ndingafumaneka kangangoko uthanda. Unokuba ngasese ngokupheleleyo kwaye wenze eyakho into, ungabhukisha kunyango lobugcisa okanye iseshoni yokucebisa ukuze uthethe okanye usombulule nayiphi na imiba, okanye ungancokola nje kwaye udibane nezinja zam zesoseji ezikhohlakeleyo, iPepper kunye nePickle, ufumane izimvo apho unokutyelela ngexesha lokuhlala kwakho. Ukhetho lwakho
Ndingafumaneka kangangoko uthanda. Unokuba ngasese ngokupheleleyo kwaye wenze eyakho into, ungabhukisha kunyango lobugcisa okanye iseshoni yokucebisa ukuze uthethe okanye usombulul…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mornington